“Qaxootiga yaan la siinin baasaboorka Sweden, cayrtana ha laga goosto” | Somaliska
Fikradaasi waxaa soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga Sverige Demokraterna (SD) Jimmie Åkesson. Isaga oo la hadlay idaacada Sweden ayuu sheegay in loo baahanyahay in xayiraad lagu sameeyo bixinta baasaboorka Sweden ilaa laga dhamaystirayo baaritaan ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa qiimaha baasaboorka wadanka.
Åkesson ayaa soo jeediyay in guud ahaan la joojiyo bixinta baasaboorka, ka dibna aan baasaboorka la siinin qof aan luuqada baran, isla markaana aan qaadan dhaqan Swedishka. Waxa uu sheegay in wax badan ay ka qaldanyihiin nidaamka hada jira maadaama ay jiraan dad wadanka muddo ku noolaa oo aan luuqada aqoon isla markaana aan qaadan dhaqanka Swedishka. Waxa uu intaasi ku diray in la sameeyo farqi muuqda oo u dhexeeya baasaboorka iyo sharciga deganaanshaha (uppehållstillstånd).
Waxa uu soo jeediyay in hoos loo dhigo xuquuqda dadka sharciga ku leh wadanka ee aan la hayn baasaboorka Sweden, tusaale ahaan in aan la siinin cayrta. Intaasi waxay ku dareen SD in kor loo qaado mudada qofku ku qaadan karo baasaboorka oo la gaarsiiyo ilaa 10-sano.
Fikradaan SD ayaa ah mid culeys weyn ku keenaysa dadka qaxootiga ku ah Sweden, qaasatan Soomaalida oo horey u sugaysay 8-sano balse haddii SD ay ku guuleystaan fikradaan ayay aad u adkaanaysaa in la qaato baasaboorka Sweden. Inkastoo SD aysan hadda ku jirin dowlada Sweden ayay macquul tahay in ay doorashada 2018 ay heshiis la galaan xisbiga Moderaterna (M) oo maalmahaan bilaabay in ay koobiyeeyaan fikradaha SD.
Sidee kula tahay fikrada Jimmie Åkesson?
Amal waxay Sweden ku soo gashay qaxooti maantana dhaqtar
Dhismihii lagala wareegay kaniisada oo laga furay Masjid [Video]
waa cunsuri neceb ajaaniibta weligiisna meel gaarimaayo 8 sani hadaan sugnay maxay naga dhibee toban sano .Horaa looyiri ninkii bil soomo beryo kuma deriwaayo adeer kasoco dheh waxaw meesha kuhaayo malahanee.
Hadaanba la yaabanahay sideeda sano ma wuxuu dhahayaa tobansano wuxuu ii cadeeyey inuu yahay cunsiri tankale dadka qaar waxay ku qaataan shansano illaah amarkii somalia maxaa helay
February 23, 2016 at 18:49
asc soomaalay. aniga waxey iltahaay ninkaan waa nin waalan oo hadu dadka ka jaroo ceeyrta yar oo shaqo meshaa olin ma dadka e ineey afka dubtaan dukaamada iyo bangiyada dhacaayan mexee semeynayan.ninkaan sweden maano koobiyo ha u dirtoo hadii kale qaxooti dhaan sidii salool camaal oo dubana runta. dhamka baasa boorko aniga somali awoolba waxaa naladhahaa garab raraato waxaas dhiib uma araagno ilaah aa kaweeyn asbaxaan 2018 qufkii nool aa gaaro insha allah waa laqeeyr.asc
February 23, 2016 at 22:09
SD IYO DADKA KUFIKIKA AH BAL TAARIIKHDE SWEDEN HABARTAAN IYAGA MARKA HORE SABABTOO AH WAXAAN OGNAHAY IN SHACABKA SWEDEN EEY QAXEEN HADE KA HOR OO USA IYO WADAMO KALE MARKE BAL HALA WEYDIIYO IN AWOOWGIIS UU KAQAXAY SWEDEN BAL HALA WAREESTO IN CIRIIRI LAGILIYI IYO INKALE MARKE SD WAA URUR AMA XIZBI RABO IN SWEDEN EEY FOWDO NOQOTO OO NACEEYBKA IYO IS XAQIRKE IYO IS CUNSURIYEENTA MARKE HADII SD TALADOODE LAQAATO DHIB AAD UBADAN AA DHACAAYO SWEDEN WAA WADAN SUMCAD WANAAGSAN KULEH ADUUNKA EE SD HALAGA QABTO
aniga waxan qabaa in ey intaas kaliya ku sima doonin SD
ninka hada hogaamiya xisbiga talada hayana waa nin aan siyasadiisa fadhiyin oo si fudud loo weeci karo. hadaba maxaa nagu haboon hadii aan soomaali nahay
waa in aan dhexda u xiranaa sidaan wadankeeni u dhisan laheyn oo aan qabyaalada iska ilownaa oo aan qaranimo raadinaa heybad waxaad ku leedahay dhulkaada hooyo waana lama huraan
luul ..l thanks waa fikrad wanaagsan ,, somaali diyaar ma u tahey mise tuugsiga yurub cimrigeeda ku dhamaandoonaa
Asc cidan wadan koda ayay leeyihiin wadan keena aan hagaagsano ayaan ceyr siinnayna
February 27, 2016 at 01:38
Madaxweynaheena arbacada uu imanayaa waa in aan muujinaa arrintan 8 sano oo salka ku haysa aqoonsi laanta Somali documents.